SD Kaadị Data Recovery: Olee otú naghachi faịlụ site SD Kaadị
SD Kaadị Iweghachite: Olee naghachi Data si SD Kaadị na Windows na Mac OS
Mgbe na-ezighị furu efu dị oké ọnụ ahịa photos, videos na ndị ọzọ na data gị SD kaadị? Ka ịtụ ụjọ na bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi ndị formatted, ehichapụ na efu faịlụ? Ị ga-asị na ọ dịghị edi ata azịza ya bụ ee. I nwere ike igosi SD kaadị mgbake mfe na gị onwe gị n'agbanyeghị na ị na-agba na kọmputa na Windows ma ọ bụ Mac OS.
SD Kaadị Iweghachite Software: Naghachi faịlụ site SD Kaadị na 3 Nzọụkwụ
Site n'ịdabere na-atọ ndị ọzọ SD kaadị data mgbake software - ọ bụ mara mma ogologo n'ihu. Micro SD data mgbake software ga-eji elu algọridim ike iṅomi gị SD kaadị na igwu disk ịchọ gị ehichapu faịlụ. Wondershare Photo Recovery (Maka Windows 8) na Wondershare Photo Recovery for Mac (maka Mavericks) ndị dị otú ahụ mgbake software nke nwere ike naghachi ihe oyiyi si SD kaadị mfe, nakwa dị ka video na ọdịyo faịlụ.
Nke a SD kaadị mgbake software bụ mma mfe iji. Enyi na enyi-ọrụ interface eme ka ihe niile doro anya ma dị mfe iji rụọ ọrụ. Dị nnọọ download free ikpe version n'okpuru nwere a na-agbalị mbụ.
Naghachi image, video na ọdịyo faịlụ na ọtụtụ data ọnwụ ọnọdụ
Gụọ-na-, mfe na-eji, na-eri-irè
Naghachi data si a zoputara Doppler enweghị rescanning
Preview image faịlụ n'ihu mgbake na na-na naanị ndị ị chọrọ.
Igosi SD Kaadị File Iweghachite on Mac ma ọ bụ PC
N'agbanyeghị nke version ị na-ahọrọ, mgbake nzọụkwụ bụ otu. Dị nnọọ download nri version maka kọmputa gị na iji ya dị ka nzọụkwụ ẹkenam n'okpuru.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị SD kaadị na-amalite
N'ebe a, anyị na-agbalị Windows version naghachi SD kaadị faịlụ. Nke mbụ niile, jikọọ gị SD kaadị na kọmputa, wee wụnye SD kaadị usoro. Agba ya na pịa "Malite" bọtịnụ na mmalite window na-amalite SD kaadị mgbake.
Nzọụkwụ 2 Họrọ SD kaadị ike iṅomi ya
Mgbe gị SD kaadị ghọtara site omume, ị pụrụ ịhụ na ọ egosipụta na ndepụta nke draịva. Họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị SD kaadị na pịa "iṅomi" ịchọ furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ na ya.
Rịba ama: Ị nwere ike nụchaa n'ihi site na iji "iyo Option" ọrụ ma ọ bụrụ na ị maara ihe di iche iche nke faịlụ na ị na-achọ. Dị pịa na ya ma dozie (audio, foto ma ọ bụ video).
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake SD kaadị data selectively
Mgbe iṅomi okokụre, ị ga-enwe ike preview hụrụ faịlụ ka ego ma gị furu efu faịlụ na-hụrụ ma ọ bụ. Wee họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi ha si SD kaadị na otu Pịa.
Common SD kaadị data ọnwụ ndapụta
Wondershare Photo Recovery Nwere ike igosi SD kaadị data mgbake n'okpuru n'okpuru ndapụta:
»mmadụ na mberede ehichapụ faịlụ site na SD
kaadị» formatted SD kaadị
»SD kaadị ọkọdọ emerụ ma ọ bụ
keerughi» Virus inflection
odida» Ndị ọzọ
Ka ọ dịgodị, ma ama SD kaadị dị ka Lexar SD kaadị, Sandisk SD kaadị, ATP SD kaadị, Kingston SD kaadị, Transend SD kaadị, PNY SD kaadị wdg, na kaadị ụdị dị ka Obere SD kaadị, SDHC kaadị, na MMC kaadị nile na-akwado.
Ọ bụrụ na ị na-achọ naghachi ndị ọzọ faịlụ, dị ka ozi, Office akwụkwọ, Archieves, PDF faịlụ, wdg na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa media, ị nwekwara ike na-agbalị na: Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, nke bụ ike na-agbake fọrọ nke nta niile faịlụ na ụdị.
Ọzọ bara uru Atụmatụ maka SD kaadị:
Mgbe ị na mmadụ na mberede furu efu data gị SD kaadị, ozugbo kwụsị iji gị SD kaadị nke echekwara dị oké ọnụ ahịa foto, fim na ndị ọzọ faịlụ. Ọ bụrụ na ị ọtụtụ ihe ndị ọzọ akọ, nkwụnye ahụ SD kaadị nke na ngwaọrụ dị na igwefoto dijitalụ, camcorder, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ọbụna egwuregwu console, wdg na-etinye ya ebe dị nchebe.
Ịkpachara anya: Mgbe ka ebughibu SD kaadị nwere ohere ọ bụla na-ata ahụhụ ahụ mebiri.
Gịnị mere ị ga na-ihe ndị mbụ? - Iji jirichaa ohere nke SD kaadị data mgbake. Nyochawa-ekwu okwu, otu ihichapụ ma ọ bụ usoro nhọrọ agaghị ihichapu ezigbo data na-azoputa na gị SD kaadị. The ezigbo data ka na echekwara na oké ọnụ ahịa ndi nke disk na gị SD kaadị. Dị ka ogologo oge ndị data na-adịghị overwritten (Ọ bụrụ na ị na-anọgide na-azọpụta ndị ọzọ faịlụ, ha nwere ike na overwritten), ọ bụ maa-ekwe omume ka ndị furu efu faịlụ abịa ndụ na SD kaadị mgbake software.
Naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ MMC Files na 3 Nzọụkwụ
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi SD Kaadị Iweghachite